ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “နေဘုန်းလတ်သို့ ….“
ဘလော့ဂ်ဂါမောင်နှမတွေအကြား ချစ်ခင်ရင်းနှီးစွာ စနောက်ကြရင်း "မြို့စားကြီး နေဘုန်းလတ်" လို့ နာမည်တွင်ခဲ့တဲ့သူ။
မနှစ်က ဒီလိုနေ့မှာပဲ "လွတ်ကျခဲ့တဲ့မြို့တော်" ဘလော့ဂ်လေးကို သူကိုယ်တိုင် အသက်သွင်းခဲ့တယ်။ ဒီနေ့တော့ တစ်နှစ်တင်းတင်း ပြည့်သွားပြီပေါ့။
မှတ်မှတ်ရရ သူ့ဘလော့ဂ်မှာ ပထမဆုံးတင်လိုက်တဲ့ ပို့စ်နာမည်ကလည်း "လွတ်ကျခဲ့တဲ့မြို့တော်" တဲ့။ လက်တွေ့ဘဝမှာ သူလွတ်ကျခဲ့တဲ့ စာရေးဆရာ၊ ဒါမှမဟုတ် အနုပညာသမားဆိုတဲ့ အမည်နာမတွေအတွက် သူ့ဘလော့ဂ်ဟာ သစ္စာရှိတဲ့ လူယုံ၊ အစွမ်းထက်တဲ့ လက်နက်၊ အရိပ်ကောင်းတဲ့ ညောင်သစ်ပင်လို အသုံးတော်ခံခဲ့တယ်။ ရက်ပေါင်း ၃၆၅ ရက်အတွင်းမှာ သူ့မြို့တော်က စာကောင်းစာသန့် ၁၂၂ ပုဒ် မွေးထုတ်ပေးခဲ့ပြီးပြီ။ ဒီစာတွေကြောင့် ဖတ်သူတွေအတွက် သုတပန်းတွေ လန်းလာခဲ့တယ် ၊ ရသလမ်းတွေ ဆန်းလာခဲ့တယ် ၊ ပညာမီးတွေ လင်းပလာခဲ့တယ် ။ သူကတော့ သတိထားမိ ချင်မှ ထားမိလိမ့်မယ်။
ဘလော့ဂ်ဂါတွေအတွက် ပထမဆုံးဆိုတဲ့ စကားလုံးတော်တော်များများမှာ သူနဲ့ လွတ်ကျခဲ့တဲ့ မြို့တော်လည်း ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခဲ့တယ်။ ဘလော့ဂ်ပို့စ်တွေကို ပထမဆုံး ပုံနှိပ်မယ့် စာအုပ်အတွက် တက်တက်ကြွကြွနဲ့ သူ အစွမ်းကုန်ကြိုးစားခဲ့တယ်။ စာအုပ်ကိစ္စ ဆွေးနွေးပွဲတိုင်းကို မပျက်မကွက်တက်ရောက်ခဲ့သူဟာလည်း သူတစ်ဦးတည်း ရှိခဲ့တယ်။ နောက်ပြီး ရန်ကုန်မှာ ပထမဆုံးကျင်းပခဲ့တဲ့ Blog Day Seminar အတွက်လည်း သူ ပါဝင်ခဲ့တယ်။ MRTV4 နဲ့ အခြားသော မီဒီယာတွေအကြားမှာ ဘလော့ဂ်လောက အကြောင်းကို သူချပြရဲခဲ့တယ်။ ဝေဖန်မှုတွေကို လက်ခံခဲ့တယ်။ မေးခွန်းတွေကို အပြုံးနဲ့ ဖြေကြားပေးနိုင်ခဲ့တယ်။
မြန်မာဘလော့ဂ်ဂါရပ်ဝန်းမှာ ဓလေ့ထုံးတမ်းတစ်ခုရှိတာက ဘလော့ဂ်တစ်ခု ဒါမှမဟုတ် ဘလော့ဂ်ဂါတစ်ယောက်ရဲ့ အထိမ်းအမှတ်နေ့တွေမှာ အထူးရေးသားတဲ့ ပို့စ်တွေ တင်တတ် ကြတယ်၊ သူငယ်ချင်းတွေက လာနှုတ်ဆက်ကြတယ်၊ Comment တွေ ချီးမြှင့်ကြတယ်။
ဒီနေ့ သူ့ရင်နဲ့ တည်ထားတဲ့ မြို့တော်ကြီး တစ်နှစ်ပြည့်တယ်။ ခုလိုအချိန်မှာ သူသာ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရေးသားခွင့်ရမယ်ဆိုရင် သူ့ဘလော့ဂ်အတွက် အထိမ်းအမှတ်ပို့စ်တင် မယ့် အစီအစဉ်ရှိမယ်ဆိုတာ အသေအချာပဲ။ ဒါပေမယ့် သူ … ဘယ်မှာလဲ ။ သူရေးမယ့် ပို့စ်မှာ Comment ရေးဖို့ ဘလောဂါ့ရပ်ဝန်းက သူငယ်ချင်းတွေ သူ့ရဲ့ စာဖတ်ပရိသတ်တွေ မျှော်လင့်တကြီး စောင့်နေကြတယ်။ " မြို့စားကြီး " လို့ စနောက်ကြဖို့ စောင့်နေကြတယ် … ဇန်နဝါရီ ၂၉ ကတည်းက ခြောက်သွေ့နေခဲ့ရတဲ့ သူ့မြို့တော်မှာ အပြုံးတွေနဲ့ ဖုံးလွှမ်းနေစေချင်တာ … ရယ်သံတွေနဲ့ စီညံနေစေချင်တာ … ဒါတွေအတွက် အားလုံးက စောင့်မျှော်နေဆဲပါ ..။
ဘလော့ဂ်ဂါတွေကို ချစ်ကြည်စေချင်တဲ့ သူ့အတွက်၊ လူငယ်တွေကို ကောင်းစေချင်တဲ့ သူ့အတွက်၊ တိုင်းပြည်ကို တကယ်ချစ်တဲ့ သူ့ အတွက် ဘေးဒုက္ခဆိုတာ မြူတစ်မှုန်စာတောင် ကျရောက်မလာစေဖို့ ဘလော့ဂါရပ်ဝန်းမှ ညီအကိုမောင်နှမအားလုံးက ဒီအမှတ်တရ ပို့စ်လေးနဲ့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
(ကိုပေါ၏ ဖြည့်စွက်ချက်။ ။ နေဘုန်းလတ်ကို လူကိုယ်တိုင် မမြင်ဘူးပါ။ မြင်ဘူးလျှင်လည်း လူနှင့် နာမည်တွဲမသိခဲ့။ ကိုယ်က ဘလော့လောကထဲ ရောက်လာသည်မှာ မကြာသေးတာလည်း ပါသည်။ နာမည်ကတော့ ဘလော့ဂါမိတ်ဆွေများ နှုတ်ဖျားမှာ မကြာခဏ ကြားရတတ်သည်။ သည်လိုနှင့် သူ့နာမည်ကို ကြားရသည့် အကြိမ် အရေအတွက် တဖြည်းဖြည်း ပိုစိတ်လာသည်။ ဇင်ကိုလတ်နဲ့ နေဘုန်းလတ် ဆိုပြီး လတ် ၂ လတ်ရှိပုံကိုလည်း သိခဲ့ရသည်။ ခင်မင်သူ၊ ချစ်ခင်သူများပြားသူ အနုပညာသမားတယောက် ဖြစ်ကြောင်းရိပ်စားမိလာသည်။ ယခု သူအထိန်းသိမ်းခံရတော့ ကျနော်စိတ်မကောင်း။
လူငယ်တယောက်၊ အနုပညာသမားတယောက်ကို ဘာအပြစ်မှ မယ်မယ်ရရမရှိဘဲ ဥပဒေမဲ့ ထိန်းသိမ်းခြင်းကို ကျနော် အပြင်းအထန် ကန့်ကွက်ပါသည်။ လူတယောက်၏လွတ်လပ်ခွင့်ကို ပိတ်ပင်ခြင်းဖြင့် ဘယ်သို့ဘယ်ပုံ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ကို ချီတက်မည်လဲဟု ထိန်းသိမ်းထားသော အာဏာပိုင်များကို မေးချင်ပါသည်။ လူငယ်တွေ၏ အနာဂတ်ကို အိပ်မက်များကို ဖျက်ဆီးပစ်နေခြင်းဖြင့် ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော နိုင်ငံတော်သစ်တရပ်ကို ဘယ်လိုတည်ထောင်မလဲဟု မေးချင်ပါသည်။ အို......နိုင်ငံအတွက်တွေ ဒီမိုကရေစီအတွက်တွေ အသာထားလို့ ကိုယ်ချင်းစာ တရားနဲ့ဘဲ စဉ်းစားကြည့်ပါဦးတော့။ သင်တို့တူ၊ သင်တို့သား၊ သင်တို့ညီကို အခုလို မတရားသက်သက်ဖမ်းချုပ်လျှင် သင်တို့ စိတ်ကောင်းနိုင်ပါမည်လား။ ဘယ်လိုနှလုံးသားနဲ့များ လူငယ်များစွာရဲ့ အိပ်မက်တွေကို နင်းခြေဖျက်ဆီးရက်သလဲ။
နေဘုန်းလတ်ရဲ့ မိတ်ဆွေ၊ ဘလော့ဂ်ရေးဖော် မြန်မာလူငယ်များအတွက် နေဘုန်းလတ် ဘလော့ဂ်နှစ်ပတ်လည် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် သူတို့ ခင်တဲ့ “မြို့စားကြီး” ဓါတ်ပုံလေးကို ကြည့်ပြီး ပုံကလေးတပုံ ဆွဲပေးလိုက်ပါတယ်။)
Posted by ကိုပေါ on Wednesday, February 6, 2008
ပုံတူလေး အတွက် ကျေးဇူးပါ ကိုပေါရေ
စာမရေးဖြစ်တာကြာပေမယ့် ဒီနေ့တော့ ကိုနေဘုန်းလတ်အကြောင်းကို အားလုံးဝိုင်းရေးတဲ့စာရော၊ ကိုယ်ပိုင်ရေးရောတင်ထားပါတယ်။ လာလည်လှည့်ဦး။
really look so alike naw!
if he know tat so many of us are praying wishing and hoping for him, how happy he would!
“ ထာဝရ ပွင့်လန်းနေသော” ......အပိုင်း(၁)
“ရမ်ဘိုနှင့် စင်္ကာပူက မြန်မာများ”
"ရမ်ဘိုနှင့် သူတော်ကောင်း တသိုက်"